နိမ့်ကျသွားသည့် ဆွာချောင်းတံတား အပေါ်တွင် ယာယီ ဘေလီသံပေါင် တပ်ဆင်၊ ပြီးစီးသည်နှင့် ဖြတ်သန်?? - Yangon Media Group
နိမ့်ကျသွားသည့် ဆွာချောင်းတံတား အပေါ်တွင် ယာယီ ဘေလီသံပေါင် တပ်ဆင်၊ ပြီးစီးသည်နှင့် ဖြတ်သန်??
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၃ဝ
ရေတိုက်စားမှုကြောင့် နိမ့်ကျသွားသည့် ရန်ကုန်- နေပြည်တော်အမြန်လမ်းပိုင်း (ဆွာ ချောင်းတံတားအပေါ်)တွင် ယာယီ ဘေလီသံပေါင်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်နေပြီး ပြီးစီးသည်နှင့် ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ကောင်းချိုက ပြောသည်။
သြဂုတ် ၂၉ ရက် နံနက်က ဆွာချောင်းရေလှောင်တမံ ရေပိုလွှဲ ညာဘက်အခြမ်းပဲ့ကျခဲ့ခြင်းကြောင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာများရေ လွှမ်းခဲ့ကာ ဆွာချောင်းတံတား ရေလယ်တိုင်နှစ်တိုင်မှာ တစ်ပေခွဲခန့်စီ နိမ့်ကျသွားခြင်းကြောင့် ယာယီဘေလီတံတားကို အလျင်အမြန်တည် ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် သြဂုတ် ၂၉ ရက်ညပိုင်းက ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ် ခဲ့ပြီး သြဂုတ် ၃ဝ ရက် နံနက်ပိုင်းမှ စတင်ကာတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးကျော်ကောင်းချိုက ”ယာယီ ဘေလီတံတားထိုးနေတာကတော့ ပေလေးရာဝန်းကျင်လောက်ပြီး နေပါပြီ။ ခန့်မှန်းထားတာကတော့ ဒီည တော့ ပြီးမယ်လို့ မှန်းထားပါတယ်။ အတိအကျမပြောရဲတာက နည်းပညာကိစ္စတွေဆိုတော့ ပြောရတာ ခက်တာ ပေါ့။ ပြီးတော့ပြီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ စမ်းသပ်ကားဖြတ်သန်း တာတွေ လုပ်ဆောင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ချရပြီးဆိုရင် ဖြတ်သန်ခွင့် ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု သြဂုတ် ၃ဝ ရက်က ပြောသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး (အသွားလမ်းဘက်ခြမ်း)လမ်းတွင် တံတားတစ်စင်း၊ မန္တလေး-ရန်ကုန် (အဆင်းလမ်းဘက် ခြမ်း)တွင် တစ်စင်းတို့ရှိသည့်အနက် အသွားလမ်းဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသည့် တံတား၏ ရေလယ်တိုင်နှစ်တိုင်က နိမ့်ကျွံမှု ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်မှ မန္တလေးသွားခရီးသည်တစ်ဦးက ”သွားလို့တော့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆွာနားမှာ ကားတွေကျပ်တော့ နှစ် နာရီလောက် စောင့်လိုက်ရတယ်။ မန္တလေးကို နံနက်ကိုးနာရီလောက် မှ ရောက်တယ်။ တော်တော်နောက် ကျတာပေါ့”ဟု ပြောသည်။
ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ကဏ္ဍတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အသစ်များမရှိ၍ နိုင်ငံ
ရေတိုးဝင်မှုကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သော ရန်ကုန်-မန္တလေး ရထားလမ်း လမ်းပိုင်းအချို့ကို ပြုပြင်နေဆြဲ
အန္တာတိတ်ဒေသ ရေခဲတောင်ကျိုးကွဲမှု ရာသီဥတုပြောင်းလဲ ခြင်းကြောင့် မဟုတ်
ချစ်သူနဲ့အတူ မွေးနေ့ပွဲ ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ စကားလက် ဂျိုဟန်ဆန်